Leviticus 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Bɔne ahorow bi ne ɛho afɔre (1-6)
Obi yɛ bɔne a ɛsɛ sɛ wɔbɛka (1)
Sɛ obi ho nso a, nneɛma a otumi de bɔ afɔre (7-13)
Obi anni nna na ɔyɛ bɔne a, ɛho afodi afɔre (14-19)
5 “‘Sɛ obi* yɛ bɔne bi ho dansefo anaasɛ onim ho biribi, na sɛ wɔrepɛ nkurɔfo abedi asɛm no ho adanse,*+ nanso wammɛka ho hwee a, wayɛ bɔne na obenya ne bɔne so akatua. 2 “‘Anaa sɛ obi* ho ka biribi a ɛho ntew, te sɛ wuram aboa a ne ho ntew funu, afieboa a ne ho ntew funu, mmoa nketenkete* no biara a ne ho ntew funu,+ na sɛ onnim mpo a, ne ho agu fĩ na odi fɔ. 3 Anaa sɛ obi ani nna ne ho so na ne ho kɔka obi a ne ho agu fĩ+ anaa biribiara a ebetumi ama onipa ho agu fĩ, na sɛ akyiri yi obehu a, odi fɔ. 4 “‘Anaa sɛ obi* pere ne ho ka ntam sɛ ɔbɛyɛ biribi a, nea ɔkae sɛ ɔbɛyɛ no, papa oo, bɔne oo, sɛ na onnim na akyiri yi obehu sɛ wapere ne ho aka ntam a, odi fɔ.*+ 5 “‘Ɛba sɛ odi fɔ wɔ asɛm yi biara mu a, ma ɔnka ne bɔne.+ 6 Afei nso, bɔne a wayɛ nti, ɔmfa oguan ba a ɔyɛ ɔbere anaa apɔnkyebere kumaa mmra Yehowa anim, na ɔsɔfo no mfa mmɔ afodi afɔre+ mpata mma ne bɔne. 7 “‘Na sɛ ne nsa nso oguan so a, bɔne a wayɛ no nti, ɔmfa mmuruburuw abien anaa mmorɔnoma mma abien+ mmɛbɔ afodi afɔre wɔ Yehowa anim. Ɔmfa baako mmɔ bɔne ho afɔre, na ɔmfa baako nso mmɔ ɔhyew afɔre.+ 8 Ɔmfa mmrɛ ɔsɔfo no, na ɔsɔfo no nni kan mfa nea ɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre no mmra na ɔntew ne mene, nanso mma ɔnntew ne ti mmfi so. 9 Ma ɔmfa aboa a ɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre no mogya no bi mpete afɔremuka no ho, na ɔnsɔn mogya a aka no ngu afɔremuka no ase.+ Ɛyɛ bɔne ho afɔre. 10 Ɔsɔfo no de baako a aka no bɛbɔ ɔhyew afɔre sɛnea daa wɔbɔ no,+ na ɔde apata ama ne bɔne, na wɔde bɛkyɛ no.+ 11 “‘Nanso sɛ ɔrennya mmuruburuw abien anaa mmorɔnoma mma abien a, ɔmfa esiam muhumuhu efa nkyem du mu baako*+ mmra mmɛbɔ ne bɔne ho afɔre. Mma ɔmmfa ngo nngu so, na ɔmmfa ɛhyɛ* nnka ho; ɛyɛ bɔne ho afɔre. 12 Ɔmfa mmrɛ ɔsɔfo no, na ɔsɔfo no nsaw ne nsa ma nhyew wɔ afɔremuka no so na ɛno nnyina hɔ mma afɔre no nyinaa.* Ɔnhyew wɔ afɔremuka no so wɔ afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa no so. Ɛyɛ bɔne ho afɔre. 13 Ma ɔsɔfo no mpata mma no wɔ bɔne yi mu biara a wayɛ ho, na wɔde bɛkyɛ no.+ Nea ɛbɛka biara yɛ ɔsɔfo no dea+ te sɛ aduan afɔre no.’”+ 14 Yehowa toaa so ka kyerɛɛ Mose sɛ: 15 “Sɛ obi* fom yɛ* bɔne tia Yehowa nneɛma a ɛyɛ kronkron+ no bere a n’ani nna ne ho so a, ma ɔmfa odwennini a ɔte apɔw mmɛbɔ afodi afɔre mma Yehowa.+ Ɛsɛ sɛ aboa no bo yɛ nnwetɛbona* a wɔatwa ato hɔ sɛnea wobu dwetɛbona ano wɔ kronkronbea hɔ no.*+ 16 Obetua bɔne a wayɛ atia kronkronbea no ho mpata, na ɔde nkyem anum mu baako bɛka ho abrɛ ɔsɔfo no.+ Na ɔsɔfo no de odwennini a ɔde bɛbɔ afodi afɔre no bɛpata ama no,+ na wɔde bɛkyɛ no.+ 17 “Sɛ obi* fom kɔyɛ nneɛma a Yehowa aka sɛ mma obiara nnyɛ no bi a, sɛ onnim mpo a, obedi fɔ, na obenya ne bɔne so akatua.+ 18 Ɛsɛ sɛ ɔde odwennini a ɔte apɔw a ɔsom bo te sɛ ɛbo a wɔatwa ato hɔ no brɛ ɔsɔfo no na ɔde bɔ afodi afɔre.+ Ɔsɔfo no de bɛpata ama bɔne a onnim sɛ wayɛ bere a na n’ani nna ne ho so no, na wɔde bɛkyɛ no. 19 Ɛyɛ afodi afɔre. Wafom Yehowa, enti odi fɔ.”
^ Nt., “ntanka nne.” Ebetumi aba sɛ na ɛyɛ amanneɛbɔ bi a wɔde to gua bere a obi ayɛ bɔne no, na wɔka ka ho sɛ nnome nka ɔbɔnefo no anaa obi a onim asɛm no ho biribi nso ɔmmɛka.
^ Ebetumi aba sɛ adwene a ɛwɔ akyi ne sɛ wanni ntam a ɔkae no so.
^ Anaa “obi anni nokware na ɔyɛ.”